प्रधानमन्त्री देउवाको निर्वाचनका विषयमा मौनता कहिलेसम्म ? « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
प्रधानमन्त्री देउवाको निर्वाचनका विषयमा मौनता कहिलेसम्म ?
९ माघ २०७८, आईतवार ०६:५६
काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा सत्ता साझेदार दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र निर्वाचन आयोगले स्पष्ट धारणा राखिसकेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने सो विषयमा मौन रहनु भएको छ । उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टी कांग्रेससमेत अलमलमा परेको देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने दिन घर्किंदै गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धन सरकार मौन रहँदा अन्योल बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा निर्वाचनका विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर उहाँले ‘एक वर्षभित्र तीनै तहका निर्वाचन गर्ने’ अपूरो अभिव्यक्ति दिएपछि झनै अन्योल बढ्ेको छ ।
उहाँको सो सम्बोधनले आगामी वैशाखमा कार्यकाल सकिँदै गरेका स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले हुने भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ । अहिले सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले वैशाख–जेठमा संसदीय निर्वाचन गरेर स्थानीय निर्वाचन कात्तिक–मंसिरसम्ममा गरिसक्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका केही पदाधिकारी र प्रमुख नेताहरूसँगको छलफलमा वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्र–एकीकृत समावादीको भनाई प्रति अरुचि देखाउँदै आउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक नेताका अनुसार उहाँले सत्ता गठबन्धन कायम राख्दै एमालेलाई विश्वासमा लिएर मात्र निर्वाचनका विषयमा बोल्ने रणनीतिमा रहेको बुझिएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
कहिलेसम्म ?निर्वाचनप्रधानमन्त्री देउवामौनताविषय